Ndụmọdụ maka ịhọrọ nkesa GNU / Linux | Site na Linux
Mgbe onye ọrụ ọhụụ ruru ụwa nke GNU / LinuxỌnụọgụ nhọrọ ị ga-ahọrọ ga-akarị gị akarị. Ọ bụ ya mere na mgbe ụfọdụ, a na-eke ọgba aghara ụfọdụ, yabụ na <° Linux, anyị ga-enye gị ndụmọdụ ụfọdụ ị ga-ebu n'uche mgbe ị ga-ahọrọ.
Enwere ọtụtụ weebụsaịtị ndị na-ekwu maka isiokwu a, ọbụlagodi ụfọdụ dị ka Zegenie Studios, na-enyere gị aka ịhọrọ nke nkesa GNU / Linux ị kwesịrị (ma ọ bụ nwee ike iji) jiri ya mee ihe, site na nnwale dị mfe. Ana m akwado ha karịsịa. Mana n'eziokwu, anyị ga-edo anya nke ọma maka ụfọdụ ihe anyị ga-eburu n'uche mgbe anyị ga-ahọrọ otu nkesa, na echere m na nke mbụ bụ, mkpa anyị nwere.
Luckily na GNU / LinuxỌ bụghị ihe niile dị oji ma ọ bụ na-acha ọcha, na enwere ihe maka onye ọ bụla, nke agba niile na ọtụtụ ụtọ. Ka anyị hụ ụfọdụ ndụmọdụ ga-abara anyị uru.
1 Gbasaa ihe omuma gi.
2 Arụ ọrụ.
3 Sọftụwia dị.
5 Ebe obibi Desktọpụ.
6 Otu distro, mana ya na ekpomeekpo di iche.
7 Obodo na Nkwado.
Gbasaa ihe omuma gi.
Akpan ntak. Anyị kwesịrị ịkọwapụta ókè anyị na-achịkwa isiokwu ụfọdụ mgbe anyị na-ahọrọ nkesa yana ọ bụ ya mere ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịdekọ banyere ụfọdụ njirimara nke GNU / Linux, tumadi otu sistemụ faịlụ gị si arụ ọrụ yana ihe niile metụtara nkewa diski.
Iji gbochie ihe a na-atụghị anya ya na-eme anyị, ọ kachasị mma ịnwa itinye ihe ọmụma anyị nwere ike inweta n'ọrụ, na Igwe eji eme ihe. N'ime ya anyị nwere ike ịwụnye, nkewa, nwalee ma gbajie ihe ọ bụla, na-enweghị ihe ize ndụ nke ịnwe data ọ bụla.
Na mkpokọta, ọ bụrụ na anyị bụ ndị mbido, yana na mgbakwunye, anyị si ndị ọzọ Sistemụ arụmọrụ dị ka Windows o Mac, ọ bụ ihe ezi uche dị na anyị chọrọ ihe dị mfe, kensinammuo na nke na-arụ ọrụ na oge mbụ. N'iburu n'uche ụdị onye ọrụ ahụ, a ga-atụ aro ya na usoro nrụnye dị mfe dịka o kwere mee.
Nkesa dị ka LinuxMint, Ubuntu, emegheSuse o Mandriva, ha na-enye anyị onye nrụnye dị mfe, nke na-enye anyị ohere itinye sistemụ anyị na usoro ole na ole.
O yikarịrị ka ọ ga-ekwe omume ịchọta otu sọftụwia ahụ na nkesa niile, mana ụfọdụ n'ime ha nwere katalọgụ sara mbara karị ịhọrọ, ọtụtụ oge, ekele maka obodo ahụ n'onwe ya ma ọ bụ ndị ọzọ.
Anyị kwesịrị iburu n'uche na n'ihi nsogbu iwu, ọtụtụ distros anaghị agụnye Software na-abụghị 100% n'efu maka ụfọdụ mpaghara ụwa, anyị nwere ike ịbelata na nke ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, Ubuntu na ihe eji eme ya, nwere otu n'ime ebe nchekwa kachasị ukwuu na nke zuru oke dị, mana nwekwara ama ama PPA (ntinye ego nkeonwe), nke na-agbasawanye katalọgụ gị.
Otu n'ime ọtụtụ ihe kpatara ya GNU / Linux na-eji, ọ bụ n'ihi na ọ na-enye ohere iji naghachi ụfọdụ ngwaike na taa, nwere ike iyi ihe gharazie ịba uru. Na ntọhapụ ọ bụla nke Sistemụ arụmọrụ dị ka Windows o Mac, achọrọ atụmatụ ndị ọzọ maka ndị a iji rụọ ọrụ nke ọma na ọ dị nwute, ọ bụghị anyị niile nwere ike imeli imelite kọmputa anyị oge ọ bụla anyị Microsoft o Apple ị fancy.
Enwere nkesa ndị gbakwasara kọmputa ochie ahụ ị hapụrụ n'otu akụkụ. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịnye ya ihe ndị ọzọ, yana obere ihe ọmụma, anyị nwere ike ịnwe egwu ụlọ, data ma ọ bụ sava weebụ.
PuppyLinux, Crunchbang bụ ụfọdụ ndị ọzọ anyị kwesịrị iji n’aka maka kọmputa nwere ihe na-erughị 128 Mb nke RAM.
Ebe obibi Desktọpụ.
En Windows anyị na-enwe otu Ebe obibi Desktọpụ. Enwere ike gbanwee ọdịdị ya, mana na njedebe anyị enweghị ike ịhọrọ ọzọ. Otu n'ime nsogbu ndị ọrụ ọhụụ na-amaghị bụ na GNU / Linux, anyị nwere ike ịhọrọ ihe karịrị otu Ebe obibi Desktọpụ, na ọbụna wụnye ọtụtụ n'ime ha.
Onye ọ bụla nke nkesa nwere a Ebe obibi Desktọpụ ndabara.
Ya mere na niile. Mana nke a apụtaghị na anyị nwere ike wepu nke na-abịa na ndabara ma jiri ihe ọ bụla ọzọ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ desktọọpụ zuru ezu, dị ike ma mara mma, anyị ga-enyocha Gnome, KDE na Xfce. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe ọkụ LXDE ma ọ bụ E17. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe dị ntakịrị, anyị nwere ike ịhọrọ Fluxbox, Openbox, IceWM na ndị njikwa windo ndị ọzọ.
Otu distro, mana ya na ekpomeekpo di iche.
Ọ bụrụ na anyị amaraworị nke ahụ Ebe obibi Desktọpụ anyị chọrọ na ike iji dị ka arụmọrụ nke PC, naanị anyị ga-ahọrọ nke ekpomeekpo na-agbalị.
Enwere nkesa na-enye ngwaahịa ndị na-emepụta, nke nwere ụfọdụ ngwugwu na mgbanwe, nke ndị mmebe, ndị na-egwu egwu, ndị omenkà, ndị nkuzi, ndị edemede, ndị gammers na ọbụlagodi maka ngwaọrụ ndị ọzọ gafere PC.
- Ubuntu, Fedora N'etiti ụfọdụ ndị ọzọ, ha nwere nhọrọ nke ga-ezute ụfọdụ njirimara, na-emezu ụfọdụ chọrọ dabere na ihe ịchọrọ ịme.
Obodo na Nkwado.
Otu isi ihe anyị na - ekwesịghị ileghara anya bụ mmegharị obodo gburugburu nkesa anyị ga - ahọrọ. Ndị ọrụ ndị ọzọ, ọkwa dị elu nke akụkọ ahụhụ na ngwọta dị na ha.
Debian, Ubuntu, LinuxMint, Fedora, na openSUSE n'etiti ole na ole ndị ọzọ nwere nnukwu obodo nwere saịtị enyemaka, ọgbakọ, na ọwa mkparịta ụka n'asụsụ dị iche iche.
Ana m agwa ndị niile na-ajụ m banyere ụfọdụ nkesaNanị ụzọ ị ga - esi mara ma ọ ga - arụ ọrụ maka gị bụ site na ịnwale ya. Buru n'uche na ihe nwere ike ịrụ ọrụ maka m, ọ bụghị maka onye ọrụ ọzọ, ebe ọ bụ na anyị nwere ike ọ bụghị otu ngwaike ma ọ bụ otu ihe ọmụma ahụ.
Anyị ga-akpachara anya na ịwụnye a nkesa iji nwalee ya na na ọ na-agbaji ihe dị na sistemụ arụnyere ma ọ bụ na-ehichapụ ụfọdụ data. Ọ bụ ihe amamihe na-eji LiveCD ha nwere ike na-agba ọsọ site na flash ebe nchekwa ma ọ bụ Igwe mebere ka nka we ghara idi.
Desktọpụ <° Linux: Gnome | KDE | Xfce | LXDE | Openbox | E17 | AKWM
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ndụmọdụ maka ịhọrọ nkesa GNU / Linux
Agbalịrị m ọtụtụ, enwere m mmasị na Ubuntu maka ịdị mfe nke nrụnye na ojiji, mana m na-eji Debian ogologo oge. Ọ dị ezigbo mma, mana enwere m olileanya na ụdị nke asaa ahụ ga-eme ka nrụnye na nhazi dị mfe maka ndị ọhụrụ, ọ ga-abụ ụzọ dị mma iji gbatịkwuo ya.
Ugbu a m na-eji Mageia 2 na desktọọpụ PC na Ubunto 12.04 na laptọọpụ. Obi dị m ụtọ na ma Mageia na desktọọpụ KDE na Ubuntu na Gnome. Enwebeghị m nsogbu na nke ọ bụla n'ime ha, ana m akwado ha ka afọ ojuju.
Meh echefuru m ntakịrị banyere Win 7.
Zaghachi Luis Hernando Sanchez
Ndewo onye ọ bụla 🙂 Ezigbo isiokwu! Ọ dọtara m. M na-eji Win 7 (n'ihi na abụ m Gammer), na site n'oge ruo n'oge Ubuntu mgbe m gbanye PC ma ọ bụghị maka ịgba egwu. xD
Ọ ga-amasị m ịnwale Debian mana m na-eche mbipute 7.
Mana lee oru ngo nke na enyere gi aka ịhọrọ nke dabeere n’ajụjụ ụfọdụ
Echere m na ọ na-enyere ọtụtụ na mfe
Ahụmahụ nke ọnwa:
Acer Aspire One Netbook nwere Windows XP site na 2009. Ha hapuru m ya, ha gwa m na onwebeghi mgbe ha jikọtara na Wi-Fi, ma ugbu a ha choro ya maka intaneti, ka anyi lee ma m nwere ike ime ihe.
M na-alụ ọgụ otu ụbọchị na m achọ ịma: Wi-Fi ọkwọ ụgbọala, mmelite BIOS, firewall ... ọ dịghị ihe, ọ bụ WPA2 mbipụta, nke na-adịghị amasị ya, enweghị paswọọdụ ma ọ bụrụ na ọ na-ejikọ ...
1) Weghachi a Windows XP Professional kama Home ọ na-ebu, o doro anya na pirated. Nke a tụrụ aro na web na ọgbakọ dị iche iche (ọ dị ka wifi na ụlọ xp bụ isiokwu na-aga n'ihu na Aspire One na ..)
2) Tinye linux light in ya.
O doro anya na nhọrọ 2. M na-ahọrọ SolydX. 20 nkeji mgbe e mesịrị, wifi na-arụ ọrụ na ihe niile na-agba ọsọ (codecs, youtube, mp3, movies ...) na-enweghị agbanye mgbanye na obere oge.
Sistemụ arụmọrụ n'efu, na-enweghị anataghị ikike ma ọlị, dị ọcha, emelitere (na nkwa nke na-aga n'ihu na-emelite, ebe ọ bụ ọkara Rolling) ... Na hey, oke obi ụtọ na ya, ị nwere ike were ya gaa n'ọbá akwụkwọ ma lelee na ịntanetị ọ na-enye gị mmeri ya.
Agbanye ikpe. Onye otu ezinaụlọ zụtara laptọọpụ ọhụrụ, o doro anya na Windows 8 .. Ọ nọ na-anwa ịwụnye foto paireti maka ọnwa 5, ọ chọghị ịnụ banyere Gimp. Ọ maghị otú sistemụ a si aga, ọ kpọrọ m ụbọchị mbụ na-ekwu na ọ hụghị ebe mmemme ahụ dị, na ebe ụlọ mmanya dị, patatin ahụ ...
O doro anya na agwalarị m ya na enweghị m ike inyere ya aka, na anaghị m aghọta windo ọzọ, na ihe na-erughị 8. ​​Na mbụ, enyefere m ịwụnye linux na ngalaba ọzọ, ọ sịrị mba. Nọgide na-abụ ọnụ ma na-enwe laptọọpụ ihe fọrọ nke nta ka ọ kwụsị na eji ya.
Moral: Ogologo ndụ. Nnwere onwe iji ihe ị chọrọ…. kamakwa nnwere onwe inye aka nye ndị kwesiri ya. Emeela afọ nke nkwado Microsoft nyere ndị enyi na ezinụlọ, patch, hacks ... ọzọ.
Hahaha, ezigbo enyi ikwu. Ana m eme otu ihe ahụ afọ ole na ole. Windows 7? Aghọtaghị m, Aghọtaghị m… (nke Korean sitere na nnukwu ụlọ ahịa). Mana kachasị mma Linux, nke ka mma ma nweere onwe ya na enweghị ego.
ezigbo onyinye onyinye, ahụrụ m ụwa a n'anya GNU / LINUX
Ezigbo post, aseptic na otutu na ọdịnaya dị ka Chineke chọrọ. Maka m, onye ọrụ Ubuntu mana onye hụrụ GNU / Linux n'anya n'ozuzu, ịkwanyere ugwu na ịba ụba mgbe ị na-ekwu maka distros ma na-atụ aro ga-enwe ekele. inwe ụkpụrụ nke ịbụ onye na-adịghị ele mmadụ anya n'ihu na onye ọ bụla bụ ihe bara uru na mmega ahụ anaghị eme na blọgụ Linuxeros niile.
Kedu ihe kpatara na etinyeghị distro ọhụrụ a maara dị ka Elementary OS dị ka ihe atụ, nke ọtụtụ dị ka GNU / Linux kachasị mma na akụkọ ntolite ???